Ukuphupha wenza ucansi – Buza Noma Yini
Ukuphupha wenza ucansi
Solved16.26K views October 30, 2021 Amaphupho
Mabuza666	 August 5, 2020 0 Comments
Sanibona bengicela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha wenza ucansi?
Anonymous Answered question October 30, 2021
uchwepheshe363	 Posted August 8, 2020	 0 Comments
Ngokujwayelekile uma kade wagcina ukwenza inkonzo yasekamelweni uyaye uyiphuphe uma usuyikhumbule. Lokho kuchaza ukuphupha okujwayelekile.
Okunye ukuphupha wenza ucansi kusho ukulalwa isilwane. Abaphupha benza ucansi bathi kumnandi kakhulu ngaphezu kocansi lwangempela,
uqaphele kowa, ukuphupha ulalwa isilwane kuyasenza isichitho kumuntu othandana naye, agcine engasakuthokozeli ukuya nawe ocansi. Ukuphupha wenza ucansi akusho ukuthi unesilwane ngasosonke isikhathi, kuyenzeka uphuphe wenza ucansi bese uthola umsebenzi noma uthole imali
noma wenyuselwe esikhundleni. Ngamanye amazwi ukuphupha ucansi kubuye kubike inhlanhla ezayo eseduze. Uma ungumuntu wesifazane kungenzeka uphuphe ulele nobaba wakho noma nomkhulu wakho noma nomuntu wakini.
uma uyindoda kungenzeka uphuphe ulele nomfazi wakho, noma uphuphe ulele nomama wakho noma nogogo. Ngesinye isikhathi uyaphupha ulele nomuntu ongamazi ongakaze umbone omuhle. Ukhumbule ukushawa izibulo komuntu wesilisa kuyi sign yokuthi usungena ebudodeni sonke sina 12 years singabafana sasiphupha senza ucansi.
admin Selected answer as best October 13, 2020
Anonymous	 Posted October 30, 2021	 0 Comments
Sanibona ngbe kuchazani ukuphupha uthenga imonto?
Anonymous (anonymous)	 Posted October 18, 2021	 0 Comments
Kusho ukuthini ukuphupha ngocansi nenkosikazi kodwa ungachami nocansi lwakhona luraf
Anonymous	 Posted August 17, 2021	 1 Comment
Cela ukubuza uma uphupha ulele nomuntu wesfazane nam ngiwumuntu wesifazane
Anonymous Posted new comment January 16, 2022
Thandeka commented September 14, 2021
Nami kuyenzeka ngiphuphe lokho
Anonymous (anonymous)	 Posted August 11, 2021	 0 Comments
Sawubona, nginokuphupha abantu abangasekho bakubo ex boyfriend yami, today nje kufike isalukazi sathi asisangiboni emagcekeni akhona, after that ngiphupha engathi senza sex nalo ex boyfriend but ngisheshe ngaphaphama
Anonymous Answered question August 11, 2021
Anonymous	 Posted July 30, 2021	 0 Comments
Cel ukubuza kuchaza ukuthin ukuphaphama ucishe walala no wesifazane…kodwa uvuke wazi ukuth akumele ephuphweni ulale kodwa wazisiza wavuka before nilale
Anonymous Answered question July 30, 2021
Anonymous	 Posted July 3, 2021	 0 Comments
Sawubona ngiphuphe ngilele nobaba wengane Yam esesahlukan naye,ngabe kusho ukuthin lokho?
Anonymous Answered question July 3, 2021
Lungisani (anonymous)	 Posted June 30, 2021	 0 Comments
Sanibona uma uphupha ulele ne tshitshi kungaba isimo esinjan leso
Lungisani Answered question June 30, 2021
Anonymous	 Posted June 23, 2021	 0 Comments
Sawubona if uphupha wenza ucansi nomuntu wasilisa ungenza njani kusiza for now yini into ongayi sebenzisa
Anonymous Answered question June 23, 2021
Sihle (anonymous)	 Posted June 22, 2021	 0 Comments
Sawubona! nakhu ngiphupha ngilele no Mama ongekho nje mdala kakhulu wangasekhaya and angkhumbuli neze ewu muntu ongalungile.. Ngabe lisho ukuthi leli phupho
Sihle Answered question June 22, 2021